Misoratra anarana izao ho an'ny Adobe MAX 2020 izay ho afaka amin'ity taona ity | Famoronana an-tserasera
Amin'ity taona ity ny fisoratana anarana Adobe MAX 2020 dia misokatra ho an'ny rehetra ary maimaim-poana
Ho amin'ity taona ity Adobe MAX 2020 traikefa niomerika, miresaka momba ny fihaonambe fanao isan-taona an'ity orinasa ity izahay, afaka maimaim-poana izany ho an'ireo rehetra te hisoratra anarana sy hitandrina ny zavatra rehetra hatolony.
Daty tsara ho an'ny aza adino na inona na inona avy amin'ny Adobe izay manohy manindry mafy mafy ary izany dia mahalala ny fomba hifanarahana amin'ny andron'ny ankehitriny mba hitondrana fampiharana mahafinaritra ho an'ireo finday toy ny fakan-tsarimihetsika Adobe Photoshop lehibe.
Ary miresaka momba ny MAX MAX izahay tsy mbola afaka teo aloha maha olona. Zavatra izay miova amin'ity taona ity ho nomerika ary afaka mahita azy milamina avy amin'ny fiononan'ny tranontsika na ny toeram-piasantsika. Raha lazaina amin'ny teny hafa, miresaka momba ny fotoana tsy manam-paharoa ho an'izay tsy zakan'ny vidim-pidirana na tsy afaka mandeha any amin'ny toeram-pivoriana isika.
Adobe MAX 2020 manolora fianarana mandritra ny 56 ora sy fotoana tsy miato aingam-panahy miaraka amin'ny demo an-tserasera mivantana, fisehoana an-tsehatra amin'ny endri-tsoratra malaza sy seho mozika. Hetsika iray nataon'i Adobe ahitana mpanakanto toa an'i Ava DuVernay, mpilalao Keanu Reeves ary rap rapper Tyler the Creator, tsy lazaina intsony ny mpaka sary malaza Annie Leibovitz.
Afaka misoratra anarana ianao avy amin'ity rohy ity a Adobe MAX 2020 handray soa amin'ny fidirana amin'ny fifaninanana amin'ny T-shirt MAX MAIMAIM-POANA, amboary ny hetsika hijoro ho vavolombelona ara-niomerika, hidira amin'ny chat mivantana miaraka amin'ny créatives na fidirana fampidinana mialoha mialoha ny fihaonambe Adobe.
Ity teny nalaina avy tamin'ny Matetika ampiasain'ny orinasa i Adobe hanambarana endrika vaovao ary ny fanovana ny katalaogin'ny programa misy azy. Anisan'ireo zava-baovao, andrasana ny fahatongavan'i Adobe Illustrator ho an'ny iPad. Ka io feon-kevitra io dia azo henoina tsara any amin'izay hihaonantsika rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Amin'ity taona ity ny fisoratana anarana Adobe MAX 2020 dia misokatra ho an'ny rehetra ary maimaim-poana